MB 2015 Jona - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse eran-tany
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2015 Jona
Zava-dehibe ho antsika ny teolojia satria manome endrika ho an'ny zavatra inoantsika. Na izany aza, misy ny teolojika maro, na dia ao anatin'ny fiaraha-monina kristiana aza. Ny iray mampiavaka ny WKG / GCI ho vondron'olona mino dia ny fanolorantenantsika izay azo lazaina ho "teolojia Trinité". Na dia betsaka aza ny fampianarana momba ny Andriamanitra telo izay iray dia teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nisy ny niantso azy io hoe "fotopampianarana adino" satria azo raisina matetika izany. Na izany aza, amin'ny WKG / GCI dia mino isika fa ny zava-misy, i.e. zava-misy sy ny dikan'ny Andriamanitra telo izay iray, dia manova ny zava-drehetra.
Mampianatra ny Baiboly fa miankina amin’ny Trinite ny famonjena antsika. Ny fotopampianarana dia mampiseho amintsika ny fomba itondran’ny olon’Andriamanitra tsirairay anjara lehibe eo amin’ny fiainantsika kristianina. Andriamanitra Ray dia nanangana antsika ho “zanaka malalany indrindra” (Efes 5,1). Izany no antony nanaovan’Andriamanitra Zanaka, Jesoa Kristy, ny asa ilaina amin’ny famonjena antsika. Mitsahatra amin’ny fahasoavany isika (Efes 1,3-7), matokia ny famonjena antsika satria Andriamanitra Fanahy Masina mitoetra ao anatintsika ho tombo-kasen’ny lovantsika (Efesiana). 1,13-14). Ny Trinite tsirairay dia manana anjara toerana miavaka amin’ny fandraisana antsika ao amin’ny fianakavian’Andriamanitra.
Na dia manompo an'Andriamanitra telo amin'ny olona telo aza isika, ny fampianarana ny Andriamanitra telo izay dia mahatsapa indraindray fa tena sarotra ny manao fanazaran-tena. Saingy raha mifanaraka ny fahatakarantsika sy ny fanazaran-tena momba ny fampianarana afovoany, dia manana hery lehibe hanova ny fiainantsika andavan'andro izany. Hitako toy izao io: Ny fampianaran'ny Trinite dia mampahatsiahy antsika fa tsy misy zavatra azontsika atao hahazoana ny toerana misy antsika eo amin'ny latabatry ny Tompo Andriamanitra dia efa nanasa antsika ary hanatanteraka ny asa ilaina, mba hahitana toerana eo amin'ny latabatra. Noho ny famonjena nataon'i Jesosy sy ny fanasan'ny Fanahy Masina dia afaka tonga eo alohan'ny Ray isika, tafiditra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra Triune. Io fitiavana io dia azo omena malalaka amin'ny olona mino satria misy fifandraisana mandrakizay sy tsy miova. Na izany aza, tsy midika izany fa tsy misy hirotsaka an'ity fifandraisana ity. Ny fiainana an'i Kristy dia midika fa ny fitiavan'Andriamanitra dia ahafahantsika mikarakara ireo izay manodidina antsika. Mandalo antsika ny fitiavan'ny Andriamanitra telo izay iray mba hampidirantsika antsika ao; ary amin'ny alalantsika dia mahatratra ny hafa izany. Tsy mila antsika hanatontosa ny asany Andriamanitra, fa manasa antsika ho fianakaviany Izy hiaraka aminy. Omena hery isika hitia satria ao anatintsika ny fanahiny. Rehefa tsapako fa miaina ao amiko ny fanahiny, dia mahatsiaro maivamaivana aho. Tian'Andriamani-tsy mifindra, mifototra amin'ny fifandraisana no tadiavintsika hanana fifandraisana sarobidy sy manan-danja miaraka Aminy sy olona hafa.
Mamelà ahy hanome ohatra ho anao avy amin'ny fiainako. Amin'ny maha mpitory ahy, dia afaka mifoha amin'ny "izay" ataoko "ho an'Andriamanitra" aho. Vao haingana aho no nihaona amina andian'olona. Nifantoka tanteraka tamin'ny fandaharam-potoanako manokana aho ka tsy nahatsikaritra hoe iza no hafa miaraka amin'ny efitrano amiko. Rehefa tsapako fa nanahy ny amin'ny hanaovana ny asa ho an'Andriamanitra aho, dia nandany fotoana kely mba hihomehy ny tenako ary hankalaza fa momba antsika Andriamanitra, mitarika sy mitarika antsika. Tsy tokony hatahotra ny hanao fahadisoana isika rehefa fantatsika hoe fehezina Andriamanitra. Afaka manompo Azy am-pifaliana isika. Manova ny zavatra iainantsika andavanandro izany rehefa tsaroantsika fa tsy misy zavatra tsy hainy atao. Tsy antso mavesatra ny antso ataontsika kristiana fa fanomezana mahafinaritra. Koa satria ato amintsika ny Fanahy Masina dia afaka mandray anjara amin'ny asany isika nefa tsy mila miahiahy.
Fantatrao angamba fa teny filamatra ao amin'ny WKG / GCI ny: "Tafiditra ao ianao!" Fa fantatrao ve ny dikan'izany amiko manokana? Midika izany fa manandrana mifankatia isika toy ny itiavan'ny Trinite - hifampikarakara - amin'ny fomba manome voninahitra ny tsy fitovian-kevitra, na dia miaraka aza. Ny Trinite dia modely tonga lafatra ho an'ny Fitiavana Masina. Ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina dia manana firaisan-kina tonga lafatra nefa mazava ho olona hafa Andriamanitra. Araka ny nolazain'i Athanasius: "Unity in Trinity, Trinity in Unity". Ny fitiavana aseho ao amin'ny Trinite dia mampianatra antsika ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana feno fitiavana ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra.
Ny fahatakarana ny trinite dia mamaritra ny fiainan'ny vondrom-pinoantsika. Eto amin'ny WKG / GCI dia mandrisika antsika hieritreritra ny fomba ahafahantsika mifampikarakara. Te hitia ireo manodidina antsika isika fa tsy hoe te hahazo zavatra, fa satria Andriamanitry ny fiaraha-monina sy fitiavana ny Andriamanitsika. Ny Fitiavan'Andriamanitra fitiavana dia mitarika antsika hitia ny hafa, na dia tsy mora aza izany. Fantatsika fa ny fanahiny dia mitoetra tsy ao amintsika ihany fa amin'ny rahalahintsika sy rahavavintsika koa. Izany no antony tsy hihaonantsika amin'ny alahady fotsiny amin'ny fotoam-pivavahana, fa hiara-misakafo koa isika ary miandry am-pifaliana ny zavatra izay hataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Izany no antony anolorantsika fanampiana ho an'ireo mila fanampiana eo amin'ny manodidina anay sy manerantany; izany no antony ivavahantsika ho an'ny marary sy ny marary. Ny fitiavana sy ny finoantsika ny Andriamanitra telo izay iray.
Rehefa miara-misaona na miara-mifaly isika dia miezaka mifankatia tahaka ny fitiavan’ny Trinite an’Andriamanitra. Rehefa miaina ny fahatakarana ny Trinitera isan’andro isika, dia manaiky amim-paharisihana ny antsontsika hoe: “Ny ho fahafenoan’Ilay mameno ny zavatra rehetra”. (Efesiana 1,22-23). Ny vavaka malala-tanana, tsy misy fitiavan-tena ary fanohanana ara-bola dia ampahany manan-danja amin'ity vondrom-piarahamonina fifampizarana ity izay noforonin'ny fahatakarana Trinite. Safotry ny fitiavan’ny Ray isika amin’ny alalan’ny fanavotana ny Zanaka, ny fanatrehan’ny Fanahy Masina ary tohanana amin’ny fikarakarana ny vatany.
Avy amin'ny sakafo voaomana ho an'ny namana marary, mankamin'ny fifalian'ny olona ao amin'ny fianakaviana, dia misy fanomezana izay manampy ny Fiangonana hanohy miasa; Izany rehetra izany dia mamela antsika hitory ny vaovao tsaran'ny filazantsara.
Ao amin'ny fitiavana ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina,